China Chain ebu factory na-emepụta | Yuantuo
Onye na-ebufe efere yinye bụ itinye ihe ndị efere n'etiti agbụ ndị dị n'akụkụ abụọ nke onye na-ebufe ihe na-eme ka a na-ebufe ihe, ka ị wee ibufe ihe na-adịghị mma. A na-etinye ihe ndozi pụrụ iche na efere yinye. Dika ihe a choro nke ulo oru mmeputa, enwere ike iji ya dika usoro nzuko, ma nwee ike imata uzo na-ezite.
Main oru parameters nke yinye ebu:
1. Chain pitch: Standard ebu yinye
2. Obosara nke efere yinye: 200-1200mm
3. vegba ọsọ ọsọ: 0.5m / min-15m / min
4. Ike iru: 2500kg / M
5. Arụ ọrụ okpomọkụ nke metal erute efere yinye: - 20 ℃ - 400 ℃
Eku nke onye na-ebufe efere na-ejikarị carbon ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara, a na-ejikwa ihe dị iche iche eme ihe dị iche iche.
Igwe anaghị agba nchara yinye efere ebu bụ ụdị nnyefe ngwaọrụ ọkọlọtọ yinye efere dị ka amị elu na moto reducer dị ka ike nnyefe. The yinye efere ebu mejupụtara nke ike ngwaọrụ (moto), nnyefe aro, ala, Rolling ngwaọrụ, sprocket, yinye, amị, mmanu, yinye efere, wdg Isi akụkụ abụọ nke anụmanụ ihe erute bụ: yinye, nke na-enye traction ike. site na ya okirikiri ngagharị; efere ígwè, nke bụ onye na-ebu ya na usoro nnyefe. Multi ahiri yinye efere nwere ike iji na yiri ime ka yinye efere ebu obosara na ụdị esi ọsọ. Site na iji otutu di iche nke uzo di iche iche di iche iche di iche iche, enwere ike igbanwe uzo di iche iche na-ebughari na-enweghi extrusion, ka o wee choo ihe ndi choro nke inye aka nke ihe onunu, njuputa, nhicha na ihe ndi ozo. Anyị nwere ike ime ka isi na ọdụ nke ndị na - ebugharị efere abụọ na - agbụ agbụ agwakọta, nke mere na enwere ike kewaa karama ahụ (Ọnọdụ nke mgbanwe mgbanwe), ọ nweghị ihe fọdụrụ na eriri na-ebu, nke nwere ike izute ihe achọrọ karama efu, njuputa karama na enweghị nrụgide na-ebugharị.
Nke gara aga: ebu ebu
Osote: onye na-ebu eriri
Electric ebu eriri
Ejikọtara Belt ebu
Ngwaọrụ Mbugharị Mobile